Ukuvuma kwabathengisi be-SEO | Martech Zone
NgoLwesithathu, Agasti 13, 2014 NgoLwesihlanu, Agasti 26, 2016 U-Kieran Wilson
Ukusebenza kweinjini yokukhangela sisiqwengana sokwenza intengiso, kwaye inokudideka kwaye yenziwe njengophawu lokupaka kwisiXeko saseNew York. Baninzi abantu abathethayo nababhalayo malunga ne-SEO kwaye uninzi luyaphikisana. Ndifikelele kubanikeli abaphezulu kuluntu lwaseMoz ndababuza imibuzo emithathu efanayo:
Yeyiphi iqhinga le-SEO elithandwa ngumntu wonke elingenaxabiso?
Yeyiphi indlela yeqhinga ye-SEO ocinga ukuba ixabiseke ngokwenene?
Okwangoku, yeyiphi eyona ntsomi inkulu ye-SEO?
Inani lemixholo liyabonakala kwaye kukho ukungangqinelani phakathi kweengcali, ke ndiza kukuvumela ukuba uzenzele izigqibo, endinethemba lokuba uya kwabelana ngazo kwicandelo lamagqabaza apha ngezantsi.
Ndicinga ukuba ilizwe le-SEO sele linobunkunkqele kade. Ambalwa kakhulu amaqhinga amkelwe kuluhlu olubanzi lwentsimi olungenamsebenzi ngokwenyani. Oko kwathethi, ndicinga ukuba iqhinga elinye eligcweleyo elifuna ukufa kukungazenzisi, ukufikelela kubandayo bhengezo bendwendwe. Uninzi lwezi zicelo lwenziwe kakubi kwaye ndiyakrokrela ukuba xa befumana impendulo, zihlala zivela ngqo kwiziza apho ungafuniyo ukuthumela iindwendwe. IRandi Fishkin, Moz
Isakhiwo sokwakha. Ibihleli ibubudenge kum ukuchitha ixesha elininzi kwikhonkco lokwakha amaqhinga emva koko ekwenzeni umxholo kwindawo yokuqala. Ndihlala ndisithi kufana nokutyhala ilitye elingqukuva unyuka induli. Ngomzamo, iya kunyuka induli, kodwa umxhuzulane uyakuhlala uyibuyisela apho kufanelekileyo. Yenza iphepha lakho libe ngcono kunalo naliphi na iphepha elikwiwebhu malunga nesihloko esinye, okanye ungasipapashi. Ihlala isebenza. Akukho mzamo wokudala umxholo wokuqukethwe ofunekayo. UPatrick Sexton, wondle iBot
Kukho izinto ezimbalwa kakhulu ezingenaxabiso kwaphela; yonke into inendawo yayo. Ngale nto ithethwayo, ukongeza indawo yakho kwifayile ye- isikhombisi esikhulu ebizwa ngokuba yiPR6links4U.biz ngoku ihambile ngaphaya kokungenamsebenzi yangena kwindawo enobungozi. Ndiziva ndikhululekile ukucebisa abantu ukuba bangaze bongeze indawo yabo nakweyiphi na incwadi evumela nabani na ukuba ongeze ulwazi lwabo ngaphandle kokumodareyitha. UPhil Buckley, uCuragami
UkuBloga iBlogging. Andizukuyichukumisa le nto ngepali yesikhephe ngoku, kodwa kuphela apho kunxibelelana khona nolwakhiwo. Kukho izibonelelo zoku, kodwa abantu bafuna nje ukuphuma ezingqondweni ukuba ayisiyiyo indlela yokufumana amakhonkco. UAndy Drinkwater, IQ IQ
Ngokomntu, ndicinga ukuba ukuthengiswa kokuqukethwe licebo elingenaxabiso - xa lisetyenziswa lodwa (jonga, impendulo yokuphuma). Ndibona abantu abaninzi kakhulu besebenzisa indlela "yokwakha kwaye baya kuza" kumxholo, apho babeka khona umxholo kwaye bahlala nje kwi-esile labo belindele amakhonkco, izabelo kunye neziphumo. Ayisebenzi nje kanjalo. Ngokwenyani kufuneka usebenze ngendlela owuthengisa ngayo umxholo wakho kwaye kufanelekile, ngaphambi kokuba uvelise umxholo, kuya kufuneka ubeke uphando ekufumaneni kungekuphela nje izimvo ezinokubakho, kodwa iindlela ezinokubakho zokupapasha. Esinye sezona zithuba zibalaseleyo zokuthengisa endikhe ndazibona kule minyaka idlulileyo sisiKhokelo kwiiLebhu zabaThengi zokugenca kuGoogle News, sikunika isikhokelo esikhulu ekufumaneni ababhali abagubungele isihloko sakho ngaphambili kwaye banokufuna ukwenza njalo kwakhona. Ukuba udibanisa ukuthengisa umxholo kunye nophando olululo, oko kungaphuma ekubeni yinto engenaxabiso ukuya kwixabiso. UTom Roberts
Ndingathi mhlawumbi iiMeta Amagama aphambili kunokuba yinto engenamsebenzi. Ezinye ii-webmasters zisakuthanda ukugaxela le ndawo. Kwi-Bing banokuvelisa ixabiso kuGoogle endinokuthi lixabiso elincinci. UJames Norquay, uMthombo weendaba
Baninzi abantu abatsiba kwi Icebo lakutshanje leSEO, nokuba yeyiphi na ngenxa yokuba kuthethwa kakhulu ngayo, kodwa ngaphandle kokucinga ngayo malunga nomxholo wesiza kunye nophawu abasebenza kulo. I-Digital PR inokusebenza ngakumbi kwezinye i-niches kunezinye, umzekelo. Ingcebiso yam ihlala ijonga onke amaqhinga anokubakho ekuqaleni kodwa emva koko unciphise ezantsi ngokubhekisele ekubuyeni okunokubakho kutyalo-mali ngaphakathi kwento ethile. USimon Penson, iZazzle
Andizukuyithetha lonto rel = umbhali Ayinaxabiso, kubonakala ngathi iza kuba nexabiso elikhulu kwixesha elizayo, kodwa ndicinga ukuba ayisiyonto iphambili ngalo mzuzu. Ngoku lixesha lokwakha isiseko, alikafiki ixesha lokuba ubone iziphumo. UDanny Dover, uLifelist.com
Ii-SEOs ezininzi ziyakutyeshela ukwenza izinto ezibanika ikhonkco elingenanto, kodwa ndiyakholelwa ukuba kukho ixabiso elikhulu Amakhonkco angenasiphelo ezinokuthumela ukugcwala kwabantu abafanelekileyo. IRandi Fishkin, Moz
Andiqinisekanga ukuba impikiswano sisichazi esifanelekileyo sokuchaza oku kodwa umthunywa wokuthumela Ngokuqinisekileyo yindawo leyo, ebusweni bayo, esele ixutywe yiGoogle kunye nabanye kutshanje. Ngokwenyani, umba awukho kuthumelo lweendwendwe, kum bubugcisa bokudala nokwabelana ngomxholo omkhulu ngeendawo ezifanelekileyo, kodwa endaweni yoko amaqhinga "ogaxekile" abhalwe nje nge moniker efanayo. Ibihleli iyimeko yokudala umxholo ongabizi kakhulu, ongafundekiyo kunye nokuhlawula indawo esemgangathweni ukuyibeka kunye nekhonkco kukuziphatha gwenxa kwaye kufuneka kuyekwe, kodwa ayisiyondwendwe elithunyelwayo. USimon Penson, iZazzle
Ukubhengezwa kweendwendwe. Ngaphandle kwamathandabuzo, ngokwembono yokwakha uphawu kunye nembono yabaphulaphuli entsha akukho nto ibhetele. Ukuba isizathu sokwenza kwakho kungenxa yekhonkco, ungazikhathazi, kodwa ukuba injongo yakho kukufundisa kunye nokonwabisa abafundi emva koko uya kubona iziphumo zeshishini ezilungileyo. UPhil Buckley, uCuragami
Zininzi apha, ke ndikhetha enye enabantu abahleli ngapha nangapha kocingo- kwaye abanye kuyo! Uluhlu lwePhepha Ukukrola yenye yezo ndawo zineemvakalelo ezixubeneyo phakathi kwezo zikumhlaba wobugcisa we-SEO. Nangona kunjalo, oku kufuneka kuphathwe ngononophelo kuba awufuni ukugqiba ngemicimbi xa uGooglebot eza kutyelela. Yenze ngokuchanekileyo, kwaye ngokuqinisekileyo kukho izibonelelo ekufuneka uzenzile. UAndy Drinkwater, IQ IQ
Ndimele nditsho umthunywa wokuthumela, yenye yeendlela ezixabisekileyo zokufumana uphawu lwakho kunye nesindululo phambi kwabakhulu okanye abanye abaphulaphuli osele unayo. Njengoko ndisebenza kumshicileli ndihlala ndifumana umbono otyhafisayo weendwendwe kunye / okanye iipaki. Kuya kufuneka usoloko uzisa umdlalo wakho we-'A ', okanye ubuncinci uzame. UMartijn Scheijbeler, kwiWebhu elandelayo
Kuyinyani, onke loo maqhinga afakwe ilebheli njenge umnqwazi omnyama, ukuba iminqwazi yinto yakho, inexabiso elithile. Ngaphandle kwabangekho mthethweni ngokungekho mthethweni (abaxhaphazi beJoomla plugins, ndikhangele kuwe), unokwazi-kwaye kufanelekile- ukubona ixabiso lazo zonke ezo ndlela, nokuba ziibhlog zenethiwekhi, indawo eziqhagamsheleyo, ukuqondisa kwakhona okanye ulungiso oludala lwefashoni . Isizathu sokuba ezinye ii-SEO zisasebenzisa la maqhinga kukuba zisasebenza. Basenza ingeniso. Ngokuqinisekileyo, iziza ekugqibeleni ziya kohlwaywa kodwa ukuba wenza uhlahlo-lwabiwo mali kunye nembuyekezo yakho kutyalomali, usenokwenza inzuzo.
Ngoku, ukuba ucinga ngokwakha uphawu kunye nokukhuthaza iwebhusayithi kwaye ufuna ukusebenzisa amaqhinga anje, kuya kufuneka udutyulwe. Ukuba ucinga ukuba ungazibeka emngciphekweni wokubeka uphawu kwindawo yakho kwi-intanethi ngokusebenzisa iindlela ze-SEO ezinokubonisa ukohlwaywa kwaye unganyanzelekanga, kuya kufuneka uphume kumdlalo we-SEO ngokupheleleyo. Usisidenge, umbi kwaye awunabahlobo. Endaweni yoko, hlula uvavanyo kwaye ulwenze kwindawo eyahlukileyo ngokupheleleyo kwaye kwelinye iqela lamagama aphambili. Beka iindlela ezithile kuvavanyo. Linganisa iindleko, irenki, ukugcwala kunye nezikhokelo. Utyalomali malini? Ixesha elingakanani? Ngaba ibifanele?
Yicinge njengesebe le-R & D- njengabathengisi, sinetyala kwinkampani yethu ukuba iphonononge yonke indlela enokubangela ingeniso. Kungenzeka ukuba ezinye zezi ndlela zinokwenza kanye loo nto. Okanye abanakho ukubakho ngokwezemali. Okanye banokusilela ngokupheleleyo. Inqaku kukuvavanya kwaye ubone ukuba yintoni esebenzayo kuwe. Lahla iilebheli kunye nokuqonda kwangaphambili kwaye uhambe kwidatha. UTom Roberts
Ngelixa kuphikiswana ngokuthetha kuphela, ndiyakholelwa imimandla ehambelana ngqo (EMD's) kunye nemimandla yomdlalo okhethekileyo inexabiso le-SEO. Oko akuthethi ukuba awunakho ukubekwa phambili komntu one-EMD ukuba awunayo. Kuthetha ukuba kukho ixabiso kuyo ukuba unokufumana i-EMD okanye i-PMD. URobert Fisher, uMongameli, isigubu I-BEAT Marketing
Ndingathi mhlawumbi isakhiwo se-webmasters imimandla elahliweyo Ukuziguqula zibe ziindawo zokudibana, sisicwangciso esisebenzayo, ukuba iprofayile yekhonkco icocekile. Nangona kunjalo xa ii-webmasters zikulinganisa kwinqanaba elikhulu uGoogle angazicima kwaye uyibone isenzeka amaxesha ngamaxesha. Nangona kunjalo, uziva unxulumana nabo abafuna nje ukwenza imali. UJames Norquay, uMlawuli wezoNxibelelwano, kwiNkqubela yeendaba
Iqala ukubonakala Inkcitho yeAdwords eneneni inegalelo kwizinto eziphilayo. Andiqondi ukuba ibotshelelwe ngokuthe ngqo kodwa iyacaca kwidesaset yam ukuba idityanisiwe. Oku kwahlukile nakunyaka odlulileyo xa unxibelelwano lwalungacacanga. Njengoko uGoogle eqala ukuziva uxinzelelo ngakumbi nangakumbi kumajelo eendaba ezentlalo, kuyavakala ukuba baya kuyikhulula eyabo imigaqo-nkqubo ngokubhekisele kwiindonga zesebe langaphakathi. UDanny Dover, uLifelist.com
Zininzi iintsomi zokwakha elungileyo, umxholo oyingqayizivele kufanelekile ukuba ulunge ngokwaneleyo ukufumana inqanaba. Oko khange kube njalo kangangexesha elide, kwaye ukulunga ngokwaneleyo ukuba kukhaselwe kwaye kufakwe isalathiso akuthethi ukuba kufanelekile ngokwamanqanaba. Ukuba awuvelisi esona siphumo sihle kwi-10 ephezulu, kutheni uGoogle ekubeka kwinqanaba? IRandi Fishkin, Moz
Oko ukuthumela iindwendwe kufile! Kwaye loo SEO isendleleni yokuphuma. Ukwakha abaphulaphuli bexabiso ngophando lwe-organic aluyi kuhamba nangaliphi na ixesha kungekudala kwaye ukuba yile nto yenziwa yi-SEO koko kulapha ukuhlala. Amaqhinga afunekayo ukuphumelela ngoku anokubandakanya nolunye uqeqesho kodwa icandelo lobuchwephesha lisabaluleke njengakuqala ekwandiseni i-ROI kwisitishi. USimon Penson, iZazzle
Eyona ntsomi inkulu ye-SEO entlokweni yam yile I-SEO isebenza ngakumbi kunoyilo nokuba luncedo. I-SEO yinxalenye encinci yento eyenza ukuba indawo isebenze, hayi indawo enkulu. UPatrick Sexton, wondle iBot
Xa umntu esithi 'i-SEO indawo yam' yintoni eguqulela yona, Andinalwazi lokuba kufanelekile njani kwiwebhu kwaye ndifuna uncedo. I-SEO ayisiyo ukuzimela wedwa ukulandela hayi kwaphela. Ukuba unomntu wakho we-SEO kwisilili esecaleni, yonke eminye imiba yobukho bakho bedijithali iya kusokola. Umzobo we-Venn we-SEO ngoku uyadibana nababhali, imizobo, ubudlelwane boluntu, ividiyo kunye neR & D. UPhil Buckley, uCuragami
Ukuba ukusetyenziswa kwegama eliphambili Iimpawu zeMeta kuyanceda okanye Ukuxinana kwegama eliphambili. Thatha ukhetho lwakho kwezi. Amagama aphambili e-Meta tags baxhamla isibonelelo kuGoogle kwiminyaka embalwa edlulileyo, nangona abanye besithi banesibonelelo esincinci kwi-Bing - kodwa incinci. Ukufumana igama elingumlinganiso wegama eliphambili kwiphepha lelinye elaphulukana nazo zonke izibonelelo kwiminyaka eyadlulayo, ukanti kwi-imeyile ze-spammy esizifumana sonke kwezi nkampani ze-SEO 'zamanye amazwe', zisathetha ngale nto. Gcina iphepha lakho lizele ngamagama aphambili ngoku, kwaye uya kwenza okubi kunokulungileyo. UAndy Drinkwater, IQ IQ
Akufanelekanga ukulandelela indawo kuba zibhalwe kakhulu kule mihla kwaye ke azithembi. Isibini see-SEO ezinkulu zibhalile malunga noku ukusukela 'kunganikwanga' kuphehlelelwe ukuba kutheni kufuneka uzilandele: zizonke zinika isishwankathelo esihle ngendlela oqhuba ngayo kwiinjini zokukhangela. Ndivumelana nabo ngokupheleleyo, ikunika ukuqonda okukhulu kwindawo okuyo ngoku kwintengiso kwaye isibonelela nangedatha ebalulekileyo kubakhuphiswano abanokubakho njengoko sidibanisa oku kunye neenzame zethu zophando. UMartijn Scheijbeler, kwiWebhu elandelayo
Oko I-SEO yiyo yonke into oyifunayo. Kukho umbono oqhelekileyo wokuba uqeshe inkampani elungileyo ye-SEO kwaye baya kukunceda wenze izigidi zeedola kwiinyanga kwaye le yeyona ntsomi ixhaphakileyo kumzi mveliso wethu. Ndiyakholelwa ukuba ukukhula kweshishini kuxhomekeke kwizinto ezininzi ezahlukeneyo ezibandakanya umgangatho wenkonzo okanye imveliso, ixabiso lebrendi, utshintsho kwimakethi, ukuthengisa, iinkonzo zabathengi nokunye. I-SEO yinxalenye enye yentengiso. UMoosa Hemani, uyathetha
Into endihlala ndiyithetha kubantu abatsha kwi-SEO kukungakholelwa kuyo yonke into. Oko kuhamba ngokungathathi igama likaGoogle njengeendaba ezilungileyo kwaye ungakholelwa yonke iposti yebhlog ye-SEO oyifundileyo. Inyaniso kukuba, uninzi lwezithuba zebhlog ze-SEO zezona zibalulekileyo. Uninzi lwethiyori, uninzi ziintsomi- uninzi lweebhlog ze-SEO abazi ukuba zivaliwe nini kwaye uninzi lwabo alunokwazi ukuthobeka ukuba lutsibe lubabethe ebusweni (unokwenza ingqondo yakho malunga nokuba uyayibona na le iyintsimbi, okanye imeta).
Kubantu abakwishishini, ndicinga ukuba iNqanaba loMlobi liyintsomi, ubuncinci ngendlela uninzi lweebhlog ze-SEO ezikholelwa ngayo ukuba zisebenza. Ingcebiso yam iya kuba kukuthintela yonke ingxolo kwaye uye kufunda into ethandwa nguBill Slawski kunye noMark Traphagen ukuba bathini ngalo mbandela-ubuncinci emva koko uya kufumana ulwazi olululo hayi izigqibo zasendle. UTom Roberts
Ukuba uninzi lwabantu abathi okanye inkampani yabo yi inkampani ye-SEO yobungcali ngokwenene kunjalo. Uninzi lweefemu ezibanga ulwazi lwe-SEO, ubuninzi, ukuqonda okuyi-10 okanye kwe-11% ye-SEO. URobert Fisher, isigubu seNtengiso yeBEAT
Eyona ntsomi inkulu ye-SEO mhlawumbi ngabantu abacinga ukuhlawula i-1 yezigidi zeedola I-PPC iyakunceda iphulo lakho le-SEO. UJames Norquay, uMthombo weendaba
Eyona ntsomi inkulu ngoku ye-SEO yile I-SEO iyaphila kwaye yomelele. Ngokwenyani, kunzima ngakumbi ukuba usebenze nge-SEO kunangaphambili. Yonke imihla, i-SEO iba sisijelo sokuthengisa esingaphantsi kwamandla. UDanny Dover, uLifelist.com
Ukuba wenza i-PR okanye ukuthengisa umxholo kunye nokufumana amaxabiso aphezulu kunxibelelwano uya kuza ngaphandle kweekhonkco zombhalo we-anchor. Inxalenye nje enye yephazili yeSEO. UDavid Konigsberg, ukuJolisa ngokuLungileyo
Ezi mpendulo zingasentla zenziwe kancinci ukuze zicace kwaye zibe mfutshane.
tags: chitha iadwordsUAndy Drinkwaterungumbhaliumkhwa omnyamaumnqwazi omnyama seoUkuThengiswa kweMpahlaimpikiswano seoi-curagamiUDanny DoverUDavid konigsberguyilongcacisoimimandla elahliweyoUkuthengisa imirhubhengqo indawo yomdlaloyondla i-botumxholo olungileyobhengezo bendwendweiNet SEOIQ IQUJames NorquayiphileLifelisted.comukwakha ikhonkcoinkwenkwenofAmakhonkco angenasipheloukujolisa ngokufanelekileyoisikhundla sephepha sokukrolauPatrick sextonPhilPPCingcali seoImpumelelo yeendabairandi yesikhumba sentlanzirobert ukulobaseo uyaphilaseo ifileIntsomi yokoiintsomiamaqhinga seoOko kuthelekiswa noyiloUSimon PensonUTom RobertsUmxholo owahlukileyointo engenaxabiso leyoZazle
U-Kieran Wilson ngumphathi weNtengiso yeDijithali Ukuqonda okuzenzekelayo, Esandula ukumilisela i-Wordsmith for Marketing, usetyenziso oluzenzekelayo ukunika ingxelo kumthengi kwiiarhente zentengiso zedijithali. Ingcali kwiqhinga lokuthengisa ledijithali, ukuthengisa ngaphakathi, kunye nomlinganiso kunye nohlalutyo; U-Kieran uyathetha kwaye ubhala ngezi zihloko rhoqo. Uye wakha kwaye wakala amasebe amathathu ahlukeneyo okuthengisa ukusuka ezantsi, kubandakanya elinye lenkxaso-mali ka-Omnicom kunye nelinye learhente ekhokelayo yentengiso yemidiya yoluntu.
Agasti 15, 2014 kwi-9: 40 AM
Iposti enkulu Kieran! Enkosi ngokwabelana ngolwazi oluluncedo kakhulu ekwabelwana ngalo apha..